Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxi ugu weynaa Europe labadi sano La soo dhaafay: Norwey Filimkan ku daawo:
Banaanbaxi ugu weynaa Europe labadi sano La soo dhaafay: Norwey Filimkan ku daawo:
Posted by ONA Admin	/ October 13, 2011
Wadamada Europe waxa ay Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ay qabanqabiyaan Banaanbaxyo waaweyn markasta oo Kaligi Taliye Zenawi soo haweysto Qaarada Europe. Waxana xasuus mudan Banaanbaxyadi G20 ee London iyo Copenhegan ka dhacay sanadkii 2009. Haddaba Banaanbaxa Norwey maxuu isna huwanyahay oo ka shabahaa banaanbaxyadaas caanka aha ee Warbaahinta Caalamku ay tabiyeen kumanaanka qofna isugu tageen.
Banaanbaxa norwey waxa uu caan ku noqday iyada oo dadka ay isasoo tubeen habeen iyo maali- la isugu bixiyay in la hortubnaado hallka shirka iyo hoteelka uu ku gabanayay KT Zenawi. Waxana dadka oo watta Dab huraya ay habeenkii oo dhan taagnaayeen banaanka Hotelka martida shirka tamarta Norwey. Roob badan ayaa da’ayay lakiin dadku maba ogeyn in roob da’ayo waxa ay ahaayeen dad aad u qiireysan oo aad u tiro badan oo isku weheshaday inay wadanka kaa saaraan Zenawi mooyaane inaysan guryahoda u hoyan. Waa ayna ku guuleysteen.
Banaanbaxa Norwey waxa uu caan ku noqday oo lagu xasusanaya in shirkii Tamarta ee loogu talo galay in uu galo Warbaahinta caalamka uu qariyay oo shirki banaanbaxu ka weynaaday. Waxana wajiyada hore ee journalada caalamka lagu soo daabacay oo Head line u noqday in shirkaas isasoo hortubeen dad badan oo ree Ogadeniya ah oo kasoo horjeeda casumada Zenawi rabana in Zenawi lageeyo maxkamad. Waxa shirkan lagu qasbay Zenawi inuu ka hadlo oo jawaabo ka bixiyo xasuuqa uu u geysanayo shacabka Ogadeniya. Dabadeetana waxa u suurtoobi weyday Zenawi inuu sii joogo Norwey oo uu la kulmo Balamo kale oo uu la laha inuu ku arko Xubnaha TPLF ee Europe oo lasii qorsheyay in ay la kulmaan Zenawi.
Waxa kale oo Banaanbaxan uu caan ku noqonaya quruxda iyo sida wanaagsan ee loo soo abaabulay. Bal hadaba hoos ka daawo banaanbaxi Norwey oo mid lamid ahi horey uga dhicin wadanka Norwey. ahna banaanbaxi ugu weynaa ee jaaliyadaha Somalida Ogadeniya abaabulaan labadi sano ee ugu danbeysay. Bananabaxan oo qeybo badan ka kooban wajigisi hore kobtan kadawo sido kale- kala soco eri-TV barnaamijka ilays;
Hoos ka daalaco Banaanbaxa norwey: